शिक्षा Archives - Page 23 of 24 - Dna Nepal
नेपालका नेताको पढाई कति ? १ आश्विन २०७४, आईतवार ०१:१९
काठमाण्डौं, असोज १ । एक टेलिभिजन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई नेताहरूको योग्यताबारे प्रश्न गरियो । देउवाले जंगिएर त्यसको जवाफ दिए । त्यो सन्दर्भ त्यतिवेला सामाजिक सञ्जालमा भाइरल नै भयो । यसरी नेता तथा मन्त्रीहरूको शैक्षिक..
तालवाराही स्कुलको ५ रोपनी जग्गा झ्वाम (पढ्नुस् विस्तृतमा) ३० भाद्र २०७४, शुक्रबार १०:१०
पोखरा, भदौ ३० । बैदामको तालवाराही माविको नाममा रहेको करोडौं मूल्यको जग्गा गायब भएको छ । तालवाराही माविको डिहिकोपाटनमा रहेको झन्डै ५ रोपनी जग्गा अहिले कागजमामात्रै सीमित भएको हो । लालपुर्जामा ११ रोपनी रहेको विद्यालयको जग्गा अहिले ६ रोपनीमा..
पिएनमा अनेरास्ववियूको ध्यानाकर्षण २९ भाद्र २०७४, बिहीबार १५:५६
पोखरा, भदौ २९ । अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियन (अनेरास्ववियू), पृथ्वीनारायण क्याम्पस एकाईले बिभिन्न माग सहित क्याम्पस प्रमुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । एकाई अध्यक्ष राजन शर्मा पराजुलीले क्याम्पस प्रमुख प्राडा चन्द्रबहादुर थापालाई..
छोरेपाटनमा प्रतिभा प्रस्फुटन
पोखरा, भदौ २९ । पोखराको छोरेपाटनमा रहेको छोरेपाटन मावि खुल्ला प्रतिभा प्रस्फुटन कार्यक्रम गरिएको छ । बाल दिवसको अवसरमा छोरेपाटन बाल क्लबले कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । कार्यक्रममा सूचना रिजाल, अमृत भण्डारी, आशिष काफ्ले, अन्जना सुवेदी, बिनिता..
कलिका माविलाई युनाइटेड क्लवको आर्थिक सहयोग
पोखरा, भदौ २९ । राष्ट्रिय बाल दिवसको अवसरमा युनाइटेड क्लव पोखराले कालिका मावि रामबजारलाई आर्थिक सहयोग गरेको छ । बिद्यालयले सञ्चालन गरेको विद्यार्थीहरुको खाजा अभियानलाई सघाउने उद्देश्यले ९ हजार रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिएको हो । बाल दिवसको..
शैक्षिक कर सार्वजनिक शिक्षामा
काठमाडौं, भदौ २९ । संवैधानिक कानूनका ज्ञाता काशिराज दाहाल भन्छन् ’शिक्षा र स्वास्थ्यका सवाल स्थानीय, प्रदेश र संघ तीनै सरकारका लागि चासोको विषय हो ।’ कल्याणकारी राज्य अवधारणा राखेर संघीयता कार्यान्वयन भैरहँदा शिक्षा निःशुल्क वा सशुल्क ?..
अस्थायी शिक्षक परीक्षा अन्यौलमा
काठमाण्डौं, भदौ २९ । बर्षौ देखि थाती रहेको अस्थायी शिक्षक समस्या समाधानको अवसर बनेर आएको शिक्षा ऐनलाई संशोधन गर्ने प्रकृया शुरु भए पछि तिनै अस्थायी शिक्षकको परीक्षा अन्यौलमा परेको छ । मिति तोकेर पनि पटक पटक सार्दै अनिश्चित बनेको परीक्षा कहिले..